Shirka Igad Khayr Iyo Shar Toona Inooma Leh’ Haddii Aynu Isku Kalsoonahay’ |
Shirka Igad Khayr Iyo Shar Toona Inooma Leh’ Haddii Aynu Isku Kalsoonahay’
Shacabkeenu iyo dowladdeenu asxaabta qarankeena haddaynu ka mideysanahay danaha siyaasadda horusocodka iyo himilada fog ee bulshadeena reer Somaliland inay shirarka ma dhalaysga ah ee ururka Igad iyo kuwa kale ee la midka ahsidaaYuruub, dalalka carbeed ee loo wada taliyo waxba inama yeeli karaan.
Hortabal eenagu ma ka wada daacadnahay qaddiyadeena guud mise cidba looga shakii iyo wer-wer qaba meeli uu bugta ka qayb galka ku dhex millanka arrimaha Soomaaliya. Oodadka qaar iyo siyaasiin badan reer Somaliland ahayey taariikhda u gaashay Xamar jeclayn oo aad moodaa inay Somaliland wax kale ku doorsadan.
Maanta adduunka beesha calaamka siyaasadiisi diblomaasinimadii fashil iyo qawaanan ayaa ku habsatay mamuuskii iyo qadarintii meeshi wey ka baxday si qawaan ayaa loo wada hadla awood xukun xoog loogu meel marinayolaysgu muquniyaa qof kastoo damiir leh xidta aan siyaasi ahayn wu fahmaya arkaya.
Hadaba Somaliland aanay siyaasiinteena indhogaradkeena waxgaradkeena aqoonayahanadeena shacabkeena kalsoonidu ka lumin cid manta ka ayaan roon nasiib badan ma jirto. Sii kasta aynuisugu fiirsano dhexdeena gudaheena mash alaah weynu guul gaadhnay heer xornimo wadatashi dimoqraadiyad ah dhaqan ku suntan yahay.
Guul Garasho Dheer iyo Gobnimo Somaliland ”’
Qalinkii.Cali C/laahi Imaciil-Dheeg